Budata PC Building Simulator maka Windows
Budata PC Building Simulator
Budata PC Building Simulator,
PC Building Simulator bụ egwuregwu ụlọ kọmputa nwere ike ịnye gị ọ funụ na ozi ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe echiche gbasara ịnakọta kọmputa.
Na PC Building Simulator, egwuregwu mepụtara nonwe ya, PC Building Simulator, anyị na -ewu kọmputa site na ọkọ. Maka ọrụ a, anyị na -ahọrọ akụkụ nke mejupụtara kọmpụta ahụ site na ngwa ahịa ma kpọkọta ya nokwu ahụ. Anyị kwesịrị ịhọrọ akụkụ nusoro. Naanị mgbe anyị họọrọ ma chịkọta akụkụ ndị ahụ nusoro ka anyị nwere ike mezue kọmpụta anyị.
Ị na -emepe igodo gị site na iji igodo I na PC Simulator PC. Nke a bụ akụkụ ị nwere ike iji. Mgbe ịhọrọ akụkụ ahụ site na ngwa ahịa, ị na -eche ebe ị ga -eji òké kwụnye akụkụ ahụ na nchekwa, wee debe akụkụ ya site na ịpị bọtịnụ aka ekpe. Ị na -eji igodo T iji nweta enyemaka na egwuregwu ahụ. Nke a bụ ndụmọdụ maka gị.
Ebe ọ bụ na PC Building Simulator nọ ugbu a na ọkwa alfa, naanị ọnọdụ nkuzi, ya bụ, ọnọdụ ọzụzụ, ka etinyere negwuregwu ahụ. Emere atụmatụ ịgbakwunye ọnọdụ ọrụ na egwuregwu ahụ nọdịnihu.
PC Building Simulator Ụdịdị